United Kingdom, Essex, Colchester, Co2 7gd
Ikhowudi yeposi: Co2 7gd
Ukubhekiswa kwiPropati: 758563. Indawo entle edibeneyo yokuhlalisa edolophini * Ukujonga okwangoku * La maxesha anzima kodwa ayimisi ukujonga amagumbi yiFaceTime, Skype njl njl. ... amagumbi ezimbalwa ziyafumaneka ngoku kunye nezinye ekupheleni kuka-Epreli. Unganqwenela ukugcina igumbi kwaye ungene emva koko ixesha lokuvalwa liphelile? Ithuba lokudibana nabantu osebenza nabo endlwini onokuhlala nalo kunye nokubona igumbi. Ngena.Udibanise kwaye ujoyine eli khaya lihlelweyo nelisandul 'ukulungiswa eliya kukunika ithuba lokuzibandakanya njengabahlali abanobuchule bokusebenza.Le ndlu imalunga nokwakha ikhaya apho ungonwabela indawo entle yokuphila ngaphandle koxinzelelo lokuhamba kwendlu . Yenzelwe wena! Amava abandakanya konke anikezelwa ukuze ukwazi ukujonga ezona zinto zibalulekileyo!
, Co2 7gd
Izikolo ezikufutshane Co2 7gd